Mmekọrịta kacha mma na egwu Smart RGB iju mmiri nwere onye nrụpụta na ụlọ ọrụ |Gịlite
Mmekọrịta na Music Smart RGB Iju Mmiri na ngụ oge
Igwe ọkụ LED:SMD2835+SMD5050/SMD2835
Ihe mgbochi mmiri:IP65
Iju mmiri LED.RGBW.DIM
Ihe Mba. Ụdị Ike Lumen Nha
Iju mmiri LED.RGB.CCT.DIM
Smart-LG189C-30W2-WFR WIFI 30W 2550 lm 210*162*28mm
Iju mmiri LED.DIM
YOURLITE RGB Flood Light LG189C bụ ngwaahịa Tuya smart ọhụrụ anyị, anyị butere ya maka ahịa Europe, RGB, dimmable na agba agba iji mepụta ikuku ekeresimesi ịhụnanya maka ụlọ gị wee mee ka ụlọ gị nwee mmasị.
Anyị RGB Iju Mmiri LG189C nwere ọtụtụ uru dị ka ndị a maka gị:
Kwado njikwa olu/APP/ Otu:Na-arụ ọrụ na Amazon Alexa (Echo/Dot/Tap) na Google Assistant, dakọtara na gam akporo&IOS.Kedu ihe ọzọ, ị nwere ike ịchịkọta ọkụ wee jikwaa ha site na iji ngwa ngwa na iwu olu.
Oge & Mbelata:Tọọ usoro ịgbanwuo ma gbanyụọ ọkụ na-akpaghị aka ka ọ na-eme.Enwere ike gbanwee nchapụta ahụ n'etiti 0-100% iji mee mgbanwe maka oge ọkụ dị iche iche.Ọrụ ebe nchekwa dị.A ga-echekwa ntọala ikpeazụ maka ịnweta ngwa ngwa oge ọzọ, na-eme ka ndụ kwa ụbọchị dịkwuo mma.
Egwu mekọrịtara ọnụ na-agbanwe agba na ọtụtụ ụdị:Ìhè iju mmiri nke RGB nwere ike ịgbanwe agba dị ka rhythm nke egwu egwu si dị.Ọ nwere 16 nde agba na ụdị 20 ịhọrọ n'ụzọ zuru oke maka ịchọ mma ememme.
Arụ ọrụ & njikọ dị mfe:Site n'enyemaka nke ntuziaka ntuziaka zuru ezu, njikọ ahụ dị nnọọ mfe ma na-ewe naanị nkeji ole na ole.Naanị tinye APP, ọkụ ọkụ na-ejikọta ngwa ngwa na ekwentị mkpanaaka na ekwentị mkpanaaka na-achịkwa ya.
IP65:Enwere ike iji ya na ụbọchị mmiri ozuzo na oyi, ọ dịghị mkpa ịpụ apụ iji chịkwaa ọkụ ọkụ n'èzí.
Ọrụ:Anyị RGB Flood Light LG189C nwere ụdị ọrụ atọ maka nhọrọ gị, otu bụ RGBW+Dimmeable, otu bụ RGB+CCT+Dimmable, otu bụ naanị dimmable.
Igwe mmiri RGB Flood Light LG189C dị na gburugburu ebe obibi dị oke mkpa maka ịchekwa ike ọkụ ụlọ.YOURLITE nwere ike ịnye gị ngwaahịa kachasị mma, anyị kwenyere na ngwaahịa anyị nwere ike gboo mkpa gị niile.YOURLITE RGB Flood Light LG189C bụ ezigbo nhọrọ maka iji chọọ ụlọ gị mma nke ọma na ụtọ, ọkachasị maka emume ekeresimesi.
Nke gara aga: Solar LED Smart Spike Light nwere isi LED 4
Osote: eriri Smart LED eriri RGB enweghị nchekasị
Igwe njikwa anya CCT DIM Smart Wall Light
Ọkụ n'èzí RGBW LED Smart Spike Lamp
PIR Sensọ CCT Dimmable Smart Iju Mmiri Iju Mmiri